काठमाडौं उपत्यकाका ५३ सहित थप ३११ जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु - Jana Prashasan
काठमाडौं उपत्यकाका ५३ सहित थप ३११ जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच हजारभन्दा बढी नमूनाको परीक्षण हुँदा थप ३११ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएको बताएको छ । मन्त्रालयको नियमित कोभिड–१९ ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सो संख्याबारे पुष्टि गरेका हुन् । यो दुई सातायताकै सबैभन्दा बढी संख्या हो । यीसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १९ हजार ६३ पुगेको छ ।
आज थपिने नयाँ संक्रमितमा काठमाडौं उपत्यकाका मात्र ५३ जना रहेका छन् । जसमा काठमाडौंका ४८, ललितपुरका चार र भक्तपुरका एक जना रहेको सो अवसरमा प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार बझाङ जिल्ला बुंगल गाउँपालिकाका ६५ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । उनी दमका रोगी रहेको बताइएको छ । यीसँगै नेपालमा कोरोनाकै कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो २४ घन्टामा १२१ जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । योसहित कोरोना जित्नेको कुल संख्या १३ हजार ८७५ पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ । यो कुल संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म ७२.७ प्रतिशत निको भएर घर फर्किएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल आइसोलेसनमा ५ हजार १ सय २९ जनाको उपचार भइराखेको छ । क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या १५ हजर ३३१ पुगेको छ । अहिलेसम्म मुलुकभरबाट ३ लाख ५२ हजार ३०७ वटा नमूनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
News Desk0response मङ्लबार, साउन १३, २०७७
२४ घण्टामा थपिए १२०४ जना कोरोना संक्रमित, ११ जनाको मृत्यु